Hub Lo Soo Waday Somalia(Bintiland) oo laqabatya - SomaliNet Forums
Hub Lo Soo Waday Somalia(Bintiland) oo laqabatya
Postby Goljano Lion » Sat Dec 25, 2010 10:22 pm
Muqdisho (Allpuntland)-Ciidamada Amaanka Dowladda koonfur Afrika ayaa gacanta ku dhigay hub tiro badan oo loo soo waday dalka Soomaaliya iyadoona gacanta lagu dhigay Shan qof oo Seddax ka mid ah dumar ay yihiin kuwaasi oo hubka la socday.
Boliiska Dalka Koofur Afrika ayaa sheegay in Howlgal ay sameeyeen Magaalada Durban ee dalka Koonfur Afrika in ay ku soo qabteen hub dhan 308 qori gacmeed oo isugu jiray qoryaha diirada leh oo aan dhawaqooda la maqal iyo hub kale, waxaana sidoo kale mid ahaa hubka gacanta lagu dhigay 592 qasnadood oo rasaas ah.
Wararka ayaa sheegaya in hubka la qabtay ee loo waday Soomaaliya loo ku tala galay la dagaalanka Kooxaha Burcada Badeeda Soomaaliya hasa ahatee lama sheegin cida uu sida tooska ah hubka ugu socday.
Vincent Mdunge oo Afhayeen u hadlay ciidamada Boliiska ee Dalka Koonfur Afrika ayaa sheegay in hubkaani laga keenay Jasiirada Malta hasa ahaatee wali ay wadaan baaritaano ku aadan ujeedada dhabta ah ee hubka iyo sidoo kale dalalka ay u dhasheen dadka hubka lagu qabtay.
Sidoo kale Afhayeenaan ka tirsan Boliiska Koonfur Afrika ayaa sheegay in Shanta qof ee ay gacanta ku hayaan islamarkaana 3 ka mid ah dumar yihiin lagu maxkamadeeyn doono Magaalada Pinetown Dalka Koonfur Afrika.
Xafiiska Warrka Allpuntland Muqdisho
Re: Hub Lo Soo Waday Somalia(Bintiland) oo laqabatya
Postby Siciid85 » Tue Dec 28, 2010 11:00 pm
Postby kismayogedojubaland » Tue Dec 28, 2010 11:26 pm
Postby Knight of Wisdom » Wed Dec 29, 2010 2:55 am
kismayogedojubaland wrote: cadowka soomaaliyeed
Bil buu geela soo waday
by guhad122 » Tue Feb 23, 2021 12:33 am » in General - General Discussions
Habaarkii islaantii habarkintir way la waday.
by ina aadan » Sat Feb 23, 2013 1:47 pm » in Politics - General Discussions
Burcoo lagu qabtay hub loo waday ONLF
by Xaaji_Xundjuf » Wed Apr 16, 2008 3:55 pm » in General - General Discussions
Xukumaada Riyaale Waday iskaa marisay Kulmiye?
by Bohol iyo karaman » Sun Apr 05, 2009 12:26 pm » in Politics - Somaliland
Sun Apr 05, 2009 12:26 pm
by Complicated19 » Mon Jan 31, 2011 2:57 pm » in General - General Discussions
Mon Jan 31, 2011 3:15 pm
Bintiland is destroying TFG from within
by grandpakhalif » Wed Sep 15, 2010 4:25 pm » in General - General Discussions
Bintiland and the TFG Cooperation might end
by The_Emperior5 » Fri Nov 12, 2010 12:54 pm » in General - General Discussions